Activity 2285479 · Manager.io/Manager · WebTranslateIt
Wai Minn changed 11 translations in Burmese on Manager. See changes » Hide changes
ကုန်ပစ္စည်း - စရိတ်
ကုန်ပစ္စည်း - ကုန်ကျစရိတ်
modifié par Wai Minn mardi 21 mai 2019 10:55:04 UTC .
ကုန်ပစ္စည်း - ရောင်းကုန်တန်ဖိုး
modifié par Wai Minn mardi 27 août 2019 11:12:26 UTC .
modifié par San Thida Myo Latt vendredi 12 octobre 2018 08:49:17 UTC .
modifié par Wai Minn mardi 27 août 2019 11:13:20 UTC .
ကုန်ပစ္စည်း - ကုန်တန်ဖိုး
modifié par Wai Minn mardi 27 août 2019 11:13:34 UTC .
modifié par Wai Minn mercredi 22 mai 2019 05:21:11 UTC .
modifié par Wai Minn mardi 27 août 2019 11:13:53 UTC .
ကုန်ကြမ်းမဟုတ်သော အခြားထုတ်လုပ်မှုကုန်ကျစရိတ်များ ထည့်သွင်းရန်
modifié par San Thida Myo Latt mercredi 17 octobre 2018 05:54:35 UTC .
ကုန်ကြမ်းမဟုတ်သော အခြားကုန်ထုတ်လုပ်မှုစရိတ်များ ထည့်သွင်းရန်
modifié par Wai Minn mardi 27 août 2019 11:15:17 UTC .
အနုတ်ပြနေသော ကုန်လက်ကျန်ကို စာရင်းမှန်အောင် စရိတ်ညှိနှိုင်းမှု
အနုတ်ပြနေသော ကုန်လက်ကျန်စာရင်းကို ကုစားရန် စရိတ်ညှိနှိုင်းမှု
modifié par Wai Minn mercredi 22 mai 2019 03:12:58 UTC .
အနုတ်ပြနေသော ကုန်တန်ဖိုးကို စာရင်းမှန်အောင် စရိတ်ညှိနှိုင်းမှု
modifié par Wai Minn mardi 27 août 2019 11:15:44 UTC .
ကုန်ပစ္စည်း - တန်ဖိုး
modifié par Wai Minn mardi 27 août 2019 11:15:51 UTC .
modifié par Wai Minn samedi 10 août 2019 09:15:22 UTC .
modifié par Wai Minn mardi 27 août 2019 11:16:34 UTC .
modifié par Wai Minn mardi 21 mai 2019 11:45:25 UTC .
modifié par Wai Minn mardi 27 août 2019 11:17:03 UTC .
အနုတ်ပြနေသော ကုန်ပစ္စည်းတန်ဖိုးကို စာရင်းမှန်အောင် စရိတ်ညှိနှိုင်းမှု
modifié par Wai Minn mardi 27 août 2019 11:17:33 UTC .
modifié par Wai Minn mardi 27 août 2019 11:18:19 UTC .